Lahatsoratra nataon'i Hanna Johnson momba ny Martech Zone |
Lahatsoratra nosoratan'i Hanna Johnson
Halalino ny valin'ny fanadihadihana nataonao: Cross Tab sy analizy sivana
Alatsinainy, May 21, 2012 Sabotsy, Martsa 2, 2013 Hanna Johnson
Manao Marketing ara-tsosialy ho an'ny SurveyMonkey aho, noho izany dia mpanohana lehibe aho amin'ny fampiasana ny fanadihadiana an-tserasera hanatonana ny mpanjifanao mba handraisana fanapahan-kevitra ara-barotra stratejika tsara kokoa. Afaka mahazo fomba fijery marobe ianao amin'ny fanadihadiana tsotra, indrindra rehefa fantatrao zavatra iray na roa momba ny famoronana sy ny famakafakana azy. Mazava ho azy fa ny fanoratana sy ny famolavolana fanadihadiana tsara dia ampahany lehibe amin'ity fizotrany ity, saingy izany rehetra izany dia miasa mialoha
Misy fahamarinana tsotra natolotry ny vanim-potoanan'ny Internet: ny fangatahana tamberina sy ny fahazoana hevi-baovao momba ny mpanjifanao sy ny tsenanao kendrena dia mora. Mety ho zava-misy mahafinaritra na mampatahotra izany, miankina amin'ny hoe iza ianao ary inona no tadiavinao hevitra momba izany, fa raha eo an-tsena ianao hifandray amin'ny fototranao hahazoana ny hevitr'izy ireo marina dia manana taonina ianao safidy maimaim-poana sy lafo vidy hatao. Misy
Iza no mamaly ny fanadihadiana ataonao? Natao ho tsotra ny fanamarinana
Alatsinainy Martsa 26, 2012 Alahady Oktobra 4, 2015 Hanna Johnson
Ny fangatahana ny hevitry ny mpanjifa alohan'ny, mandritra, ary aorian'ny fandefasana orinasa vaovao dia fomba tsara hahalalana ny fomba fandrefesanao ny mason'ny mpanjifanao. Tsy te hieritreritra mihitsy ianao hoe fantatrao ny tsapan'ny lasibatra kendrenao (reny hatramin'ny 30 ka hatramin'ny 45 taona, ohatra) momba ny zavatra ataonao, indrindra fa mora be ny manontany azy ireo. Ny vaovao tsara ho an'ny mpivarotra, na miasa amin'ny orinasa lehibe ianao
Ny vintana dia raha mamaky ianao Martech Zone, efa fantatrao ny maha-zava-dehibe ny fanaovana fikarohana eo amin'ny tsena amin'ny tetikady fandraharahana rehetra. Eto amin'ity SurveyMonkey ity dia mino izahay fa ny fahalalana tsara rehefa manapa-kevitra no zavatra tsara indrindra azonao atao amin'ny orinasanao (sy ny fiainanao manokana!). Ny fanadihadiana an-tserasera dia fomba iray fanatanterahana fikarohana amin'ny tsena haingana, mora ary mora vidy. Ireto misy fomba 3 ahafahanao mampihatra azy ireo amin'ny orinasanao
Torohevitra 4 ho an'ny "fiaraha-miasa" tsara kokoa
Alatsinainy Janoary 9, 2012 Alahady Oktobra 4, 2015 Hanna Johnson
Raha mamaky ianao Martech Zone, inoana fa nisy olona nitady anao efa nilaza fa ho zava-dehibe kokoa noho ny hatramin'izay ny fanaovana ny asa sosialy amin'ity taona ity. Ny fanadihadiana natao vao haingana natao ho an'ny GrowBiz Media dia nanambara fa ny 40% amin'ireo mpanapa-kevitra orinasa madinidinika dia mikasa ny hampiasa media sosialy tamin'ny taona 2012. Vao tsy ela akory izay no nahare vahiny iray tao amin'ny Business Insanity Radio Talk Show aho fa manome ny olona mpivarotra rehetra
Alatsinainy Desambra 19, 2011 Alahady Oktobra 4, 2015 Hanna Johnson
Ny famoronana fanadihadiana an-tserasera dia fomba haingana sy haingana hanatonana ny mpanjifanao mba hahalala ny heviny amin'ny zavatra rehetra. Ny asako amin'ny Zoomerang Online Surveys and Poll dia mety hahatonga ahy hitongilana, saingy entin'ny zavatra mahafinaritra rehetra azonao atao amin'ny fanadihadiana aho. Androany, manana safidy an-taonina maro ianao, manomboka amin'ny fampidiranao azy ao amin'ny tranonkalanao, hatramin'ny fandefasana azy amin'ny alàlan'ny hafatra an-telefaona ho an'ny olona, ​​hatramin'ny famoronana azy ary